मृत्युपछि मान्छेको शरिरमा हुने अचम्म लाग्दा ६ परिवर्तन
एजेन्सी । मान्छेको जन्मसँगै मृत्युपनि जोडिएको हुन्छ । मानिस ज्यूदो हुदाँ गर्ने उसका हरेक क्रियाकलाप मृत्युपछि सून्य बन्छ । मानिस मरिसुकेपछि के हुन्छ ? पुर्नजन्म हुन्छ कि हुदैन ? यस्ता विषयमा निकै चर्चा सुनिन्छ ।
एजेन्सी–बितेका केही वर्षमा एसियाका केही देशहरुले उल्लेख्य मात्रामा विकास गरेका छन् । केही देशहरुले विकास नै गर्न नसकिने ठाउँमा पनि
के तपाईलाई यी देशहरुका बारेमा थाहा छ...
एजेन्सी । हैदराबादस्थित रेन्बो हस्पिटलमा एसियाकै सबैभन्दा सानो बच्चा जन्मिएको छ । उक्त बच्चाको तौल ३७५ ग्राम रहेको छ । सोसल मिडियामा उक्त खबरले तहल्का मच्चाएको छ । आखिर त्यति सानो बच्चा कसरी सकुशल जन्मियो भनेर डाक्टरहरु नै अचम्मित छन् ।
यस्तो पनि ! १४ वर्षको उमेरमा प्रोफेसर...
यस्तो छ इतिहास, पाँच हजार वर्षअघि हिममानवले के खान्थे ?
बीबीसी । बाख्राको बोसो, मृगको मासुका साथै प्राचीन गहुँ र एक जातको उन्यू । मास्टर्शेफुमा देखाइने जस्तो खानाको विवरण यो होइन । यो त मानवका केही पुर्खाले गर्ने पोषिलो भोजन थियो ।
२७ वर्षभन्दा उमेर कटेका युवतीलाई चिनीयाँ समाजमा ‘बुढी कन्या’ भनेर हैरान पार्छ । समयमै विवाह गर्नुपर्ने राय बाड्ने यहाँको समाज उमेर उकालो लाग्ने बित्तिकै छानेर
भएको एउटै छोरोलाई पनि क्यानसर भएपछि...
एजेन्सी । दुई वर्ष अगाडि क्यानसरका कारण छोरा गुमाएकी एक आमाको कोशिसबाट उनलाई पुनर्जीवित गर्न सफल भएकी छिन् ।